Somaliland oo war kasoo saartay shirka Brassels iyo colaada Tukaraq
Madaxweynaha maamulka Somaliland, Muuse Biixi Cabdi
HARGEYSA, Somaliland - Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa war qoraal ah kasoo saarey shirka Belgium ee arrimaha Soomaaliya oo maanta ka furmay Brussels iyo colaadda Tukaraq.
War-saxaafadeedka ayaa waxaa daboolka looga qaaday in Somaliland u hogaan-sameyso dalabka beesha caalamka, kaasoo ahaa in xabad-joojin laga hirgeliyo Tukaraq, wadahalna la galaan Puntland.
"Waxaa naga go'an inaan tix-gelinaya codsiga beesha caalamka, ee ah in xabad-joojin laga dhaqan geliyo Tukaraq, oo miiska wadahadalka lagu dhameeyo wixii khilaaf ah" ayaa lagu yiri bayaanka Muuse Biixi.
- Shirka Brussels -
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa ka hadlay shirka ka furmay maanta Brassels, kaasoo looga hadlay arrimaha Soomaaliya, islamarkaana ay ka qeybgalayaan madaxda Soomaalida iyo beesha caalamka.
"Shirka Soomaaliya ku qabsatay Brussels, waa shir iyaga u gaar ah, mana khuseeyo Somaliland, wuxuuna la mid yahay shirarka ay ku qabsadaan Muqdisho iyo Garoowe," ayuu Muuse Bixii ku yiri war-saxaafadeedka.
Somaliland ayuu sheegay inaysan u hogaansami doonin natiijada kasoo baxda Shirka Brussels, oo lagu wado in maalinta berri ah, 17-ka July lasoo gaba-gabeeyo, islamarkaana laga soo saaro war-murtiyeed.
Hadalka Muuse Biixi ayaa imaanaya xilli shalay lagu arkay Brussels Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaraadka ee [UCID] Faysal Cali Waraabe, iyadoo aan caddeyn inuu halkaasi u tagey ka qeyb-galka Shirka socda.
Dowladaha iyo hay'adaha deeqaha dhaqaale siiya Soomaaliya ayaa dhawaan loo gudbiyay dalab ah inay joojiyaan gebi ahaanba qoondadii Somaliland la siinayay tan iyo 2013-kii, taasi oo aan la ogeyn inay her-geli doonto.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe oo la kulmay Farmaajo ayaa sheegay in Shirka...
Xajka sanadkan oo kulmiyey wasiiro ka tirsan XFS iyo Muuse Biixi
Wararka 13.08.2019. 07:30
Dufaan dhimasho sababtay oo ku dhufatay Somaliland
Somaliland 17.06.2018. 10:32